Alaab keenid dib u dhacday | Hallå konsument – Konsumentverket
Start/otherlanguages/other-languages/Other languages/so/somaliska/Soomaali/so/articles/alaab-keenid-dib-u-dhacday/Alaab keenid dib u dhacday
Alaab keenid dib u dhacday
Sen leverans av vara - Somaliska
Shirkaddu waa in ay alaabta ku keentaa waqtigii keenida ee lagu balan qaaday. Hadii aysan jirin waqti la balan qaaday waa in aad heshaa alaabta 30 maalmood gudahood laga bilaabo markaad samaysay iibka.
Goormee lagu tirinayaa in alaabi soo daahday?
Sida sharciga qabo waxa lagu tiriyaa in alaabi soo daahday hadii mid kamid ah xaaladahan soo socda ay timaado:
Aadan adigu helin alaabti waqtigii lagu balamay. Waqti lagu balamay waa waqti sida ku cad markaad samaysay adigu iibka, tusaale ahaan shuruudaha iibka ama xaqiijinta dalabka
Inaaysan jirin waqti balan qaad ama lagu heshiiyey oo waqti keenis ah, laakiin ay kasoo gudubtay ugu yaraan 30 maalmood kadib iibka welina aan alaabtii la keenin
Maxaad ka dalban karaysaa shirkadda?
Sharciga iibka macaamiisha ayaa xukumaya xhuura aad ku saari karaysid shirkadda.
Gacanta koowaad: shirkaddu keento alaabtaada
Xaq ayaad u leedahay in aad dalbato in shirkaddu hayso heshiiska qaybteeda oo ay keento alaabtaada. Isla mar ahaantaasna waxa aad leedahay fursadda in aad ka dalabto in lagu siiyo lacag sababtuna ay tahay kharashyda ku galay ee la socday soo daahista, iyo in aad ka celiso lacagtii aad bixin lahayd. Waxa aad u baahan tahay in aad maar walba ka bilaawdo dalbashada keenista alaaabta, kahor inta aysan adiga kuu jirin in aad ka dalabto in ay kuu soo celiyaan lacagta, la dhihi karo in la tuuro iibka.
Gacanta labaad: in ad tuurto iibka
Tuuris macnaheeda waa in lala noqdo iibka. Waxay ka dhigan tahay in aad adigu ku saarnayn bixin lacagta, isla markasna shirkaddu uma baaahna in ay keento alaabta. Si loo tuuri karo iib waxay u baahan tahy in aad shirkadda siiso waqti dheeraad ah oo suurta gala ah ee la xariira in aaad ka dacwootay soo daahista. Waqti dheeraad ah waa taariikh kama danbays ah oo ku saabsan goorta alaabta la keenayo oo loogu tala galay in shirkadda la siiyo fursad suurta gal ah in ay keento alaabta. Ku guuldaraysi shirkada ay keeni wayso alaabta waqtiga dheeraadka ah waad tuuri kartaa iibka.
Tuurid waqti dheer la’aan
Hadii aadan siin shirkadda waqti dheeraad ah waa qasab in dib udhaca yahay mid macno muhiima si aad ku tuuri karaysid iibka. Tusaale marka dib u dhaca uu yahay muhiim macno lehhadii:
Hadii aad xiligii iibka aad adigu horay u xaqiijisay( tusaale in aad la xiriirtay shirkadda) in alaabta la keenayo ugu danbayn taariikh cayiman.
Hadii waqtigu si furan uu kala goynayo iibka,tusaale ahaan in alaabta la isticmaalayo xili qaas ah, tusaale waa hadii aad dalbato doolshadii xafladd aroos oo aan la keeni kari waqti sax ah.
Xaqqa ka celinta lacagta
Maadaama alaabti aan la keenin sida sharciga qabo waxaad leedahay xaqqa ah in aad ka joojiso lacagta. Waxay noqonaysaa badbaadadaada si shirkaddu u keento alaabta.
Bedelsiin dib udhaca awgeed
Ma aha in ay ku galaan kharashyo ay sabaatu tahay dib u dhaca aalaabtu. Sharciga waxa uu xaq kuu siinayaabedelka kharashka dhabta ah ee yimid dib udhaca awgeed, laakiinse aysan ku jirin dhibka iyo sugidda nafsadeeda. Ma dalban karaysid xitaa bedel ama qiimo dhimisskeliya sabata oo ah alaabta oo dib u dhacday, ee waa keliya kharashaadka iyo dhaqaalaha dhaawac ee aad ku cadaynayso adigoo kaalmaysanaya tusaale warqadda lacag bixinta.
Ohadii shirkddu aysan keenin alaabtaada oo aad ku qasbanaatid in aad alaabta kaga soo iibsato qiimo sare shirkadd kale, taas xitaa waa nooc kharash dheeraad ah. Waxa la dhahaa in la sameeyo iib daboolid.
Qoraal udir shirkadda oo ka dalab keenis
La xariir shirkadda oo ka dalab in ay keenaan alaabta dib u dhacday.waa mar dhif ah keliya marka aad leedahay xaqqa tuurista iibka oo toos ah. Markaaad dalbanaysid keenis waa in aad siisaa shirkadda waqti dheeraad ah oo suurta gal ah, taariikh kama danbays ah goorta la keenayo alaabtaada.
Ma jiraan wax shuruudo ah sida ka cabasho u egtahay laakiin waxa aaan ku talinayn in aad la xariirto shirkadda si qoraal ah tusaale in aad u dirto mayl
Ka dalab in la joojiyo iibka hadii aadan helin alaabta
Hadii aad siisay shirkadda waqti dheer oo suurta gal ah, waqtigii dheeraadka ahaayna lasoo dhaafay adigoon helin alaabtaadi, waad la xariiri kartaa shirkadda oo aad tuuri kartaa iibka. Kuma xirna in shirkadu ka jawaabtay iyo in kale. Mida muhiimka ahi waa in aad cadayn kartid in aad la xariirtay shirkadda oo aad shuruud saartay.
Hadii shirkaddu kugu wargeliso in aysan keeni karin alaabta waqtiga dheeraadka ah, ama inaysanba gebi ahaanba keeni karin, waxa aad ka dalban kartaa in la tuuro iibka si toos ah.
Ka fikir in aad kula xariirti qoraal ahaan markaad tuuraysid iibka, tusaale mayl. Isla fariintaas waxa aad u iftiimin kaartaa shirkadda in aysan ku saarnayn wax waajib ah in aad bixiso lacagta alaabta. Hadii aad adigu horay u bixisay lacagta waxa aad markaas la joogo ka dalban kartaa dib usoo celin dhanka shirkadda.
Haadii aad doorato ka iibsiga alaabta shirkad kale
Hadii aad ku qasbanaatid in aad kasoo iibsato alaab u dhiganta shirkad kale, kuna qasbanaatid bixinta qiimo ka sareeya, waxaad leedahay fursadda ah in aad ka dalbato shirkadda bedelka farqiga u dhexeeya alaabada aan la keenin. Waxa la yiraahdaa in la sameeyo iib daboolid.
Si aad dalab u samayn kartid bedelka farqigaga u dhaxeeya waxa u baahan tahay in aad ku samayso iibka daaryeel. Waxa loola jeedaa in aad isku barbardhigto kala doorasho iyo doorasho qiimo suurta gal ah. Hadii aadan helin allab si fiican ugu eg waa wax la qaadan karo in aad iibsato mid isku qiimo yihiin. Alaab waxa loo arkaayaa in ay isku qiimo yihiin marka ay isku tayo, shaqo iyo qiimo yihiin.
Hadii adiga iyo shirkadda isku raacinina
Hadii aad u baahan tahay wadohagid waxa aad la xariiri kartaa Hallå macaamiil waxa aan nahay adeeg iftiinin ah oo wadanka oo dhan ah kuna siin kartaa warbixin ku saabsan xaquuqdaada iyo waxyaalaha aad kala dooran karto sida aad horey ugu socoto. Waxa aan ku siinaaynaa wado hagid aan meelna ku xirnayn oo midaas darteed ma qiimaynayno arinkaada kuu gaarka, xalino muran ama aan shirkadda kuula xariirno.
Warbixinada xiriir ee shirkadda Macaamiil Hallå
Hadii aad adiga iyo shirkadda aadan isku afgaranina waxa aad marar badan samayn kartaa in aad wargeliso hay’adda guud ee gudiga cabashooyinka (ARN) si dacwada muranka loo qaado. Wax kharash la’aan.
Kaa aqri sida wargelin loo sameeyo bogga ARN
Si aad ugu wargelin kartid ARN waa qasab in shirkadu tiri mayya shurrudahaada qayb ahaan ama gebi ahaanba, ama aysanba kasoo jawaabin.